Ukujongwa kwiArcGIS 10-Geofumadas
Ikhaya/ArcGIS-ESRI/Ukujonga kwi-ArcGIS 10
ArcGIS-ESRIGeospatial - GISezintshaUkuprinta kokuqala
NgoJuni ngo-Juni 2010 iye yaphawulwa iza kufumaneka ArcGIS 10, esiya kubona iya kuba ebaluleke kakhulu ukuqaphela izinga lokumiswa kwe-ESRI kwintsimi ye-geospatial. U seleyo iifom kunye nezinye izithuba zithethwa ngokubanzi, kwaye ngokuqinisekileyo ukusuka apha ukuya kwi Nkomfa Kubasebenzisi bakwaJulayi, siya kukwazi okungakumbi.
Kwinqanaba lokungabaza okuqhelekileyoNgokuthe ngcembe ESRI uza izinto ezingenako kuba elifutshane elide, kunye phuhlu iingenelo lothelekiso leyo ithetha utshintsho entle enkulu.
ESRI sele iqinisekisiwe, leyo ndawonye kwi umatshini enye ArcGIS ArcGIS 9.3 10, ngaphandle kokuba oko kwenziwe luhlobo drive virtual VM Ware kaThixo VM wedesktop okanye PC Virtual-Microsoft.
Kwakhona ekuchaseni kuthetha ukuba abayi kuqhubeka nokuhlaziya i-Survey Analyst, ebonakala ngathi kwinqanaba leenguqulelo ze-9.3, kuphela i-Parcel Editor eya kuba yinxalenye yeArcEditor ne-ArcInfo.
Isixhobo esibizwa ngokuba yiArcPy siyabetha, esenza geoprocessing kwiPyton. Kwaye yile, ukuba le nto yokudlala iya kuba nakho ukunqanda ukwaphuka kwamakhonkco, njengoko ngoku kusenzeka nge .mxd kunye .lyr, enokuthi ibhekise iifayile, kodwa akukho lawulo kwimeko yokuba zisuswe okanye zisuswe. Ngale nto, unokulungisa amakhonkco aphukileyo kwaye ufumane iingxelo zomaleko ekubhekiselwe kuwo kwi-mxd kunye neempawu zazo zokubonisa.
Eyona ilungileyo, ukusetyenziswa kweegeoprocesses ngasemva. Oku kusivumela ukuba siqhubeke nokusebenza kwaye kusazise xa inkqubo igqityiwe.
Kwinqanaba leenkcukacha indawoSiyavuya ukuva ukuba iPostgreSQL iyabanjwa. Nangona bengakwenzi ukuba kucace gca ukuba bayayiphucula indawo yokukhangela, becacisa ukuba inoveli yokukhangela ijolise kwinani elincinci lemethadatha, kodwa hayi ukuphucula isalathiso kukhangelo lwedatha.
ST_Geometry nge-Spatial Extender
Informix ST_Geometry kunye neSpatial Datablade
Kwinqanaba lokwakha idatha, 3D umsebenzi ugqwesa. Apha bathembisa ukuba ukuhlelwa kophawu lwendawo kuyakufumaneka kuzo zombini iArcGlobe kunye neArcScene:
Qalisa ukuhlela, ukumisa, ukugcina, ukuhlehlisa kunye nokwenza imisebenzi kwakhona. Ewe kunjalo, ngokuqhwanyaza isitayile seqonga le-CAD kuyilo kungekuphela nje ngokuchanekileyo kodwa kukwakhona.
Ukudala kweempawu ezizimeleyo, ezibandakanya ukugcinwa kwemigca yokuma kwi-geodatabase.
Ukukwazi ukuzisa imizekelo ye-3D, njenge-COLLADA, ngqo kwi-3D yokujonga, ngeendlela zokukopisha, ukuhamba, ukujikeleza, isitayela se-CAD.
Emva koko banikezela nokulawulwa kweesethi zeenkcukacha zendawo, njenge-LIDAR namafu kunye nokuhlelwa kwee-data ze-TIN kwi-ArcMap.
Nantsi ikhonkco kwividiyo ye-3D yokubonisa umthamo. Kubonakala kukuhle kakhulu
Yintoni enye? Ukujonga, ndikucebisa uncedoNangona ufuna ukubona ubutsha bolutshintsho kwimizuzu embalwa, iividiyo ziluncedo kakhulu. Nazi ezinye zonxibelelwano.
Ukusetyenziswa. Ikhathalogu ijongeka iluncedo kakhulu kwicala leArcMap, ngokurhuqa ngokulula kwaye ulahle.
Kwakhona indlela yokufumana iithebhu ezecala ingcono kakhulu.
GIS Server. Akubukeka kakubi, ukwenza i-Mashups okanye i-portals kwi-intanethi.
Ulawulo lolawulo lokugcina. Oku kunomdla kakhulu, ukulungiswa kwedatha, kunye nokulawulwa kweengqungquthela kunye nokuthengiselana kwamaninzi.
Uhlalutyo lweenkcukacha nge-ArcGIS 10. Kubonakala ngathi eyona nto iya kuthi isebenzise i-ESRI kukusingatha ii-geoprocesses. Kwaye kubonakala ngathi ikhompyuter iya kuba nakho ukwenza ngcono kwinqanaba ledatha egciniweyo. Nangona kungekho mntu uyazi ngokuqinisekileyo malunga nenkxaso engama-64 okwangoku.
Kuya kuba nama-seminars akhululekileyo, okucwangciselwe i-29 ngo-Ephreli, i-13 ngoMeyi, i-20 ngoMeyi kunye ne-17 ngo-Juni.
Imigca eli-10 yosuku oluqhelekileyo
Faka i-ArcGis 10 kodwa ayisebenzi xa ndixhunyiwe kwi-intanethi.
Ndingayisombulula njani le ??
Eyona nto ingcono yokufunda ngakumbi nge-ArcGIS 10 kunye nezinye iimveliso ze-ESRI, ndincoma:
Iifom ze-ESRIYindawo ebanzi kakhulu kwaye isebenzayo.
Ngomxholo ongaphantsi kodwa uguqulelwe kwiSpeyin, kukho I-ESRI Forum yaseSpanishi
Kwaye ke Blogs, ezisemthethweni.
Izixhobo ezingasebenzi ngawe zi nokuba kuba ziyi-extensions ongazithenga kwaye zihlawulwa ngokwahlukileyo.
Ndifuna ukufumana iincwadi zokubhala okanye ukuzivocavoca
apho ndingafumana khona iincwadana okanye umthambo wokusebenzisa le software, ndiyifake kwaye kukho izixhobo ezininzi ezingasebenziyo, kuye kwenzeka okufanayo kubo ...
Ndizama i-ArcGIS 10, andizange ndiyisebenzise, ​​kodwa iphucule kakhulu kwi-interface yayo kwimisebenzi yayo.
kwaye xa sithra kwaye siphelile ngoJuni
Andizange ndiyisebenzise njengokuba kufanelekile, kubonakala ngathi inomusa.
Le nto yokudlala iyabiza kakhulu.
Sawubona umntwana, kwaye ngoku kutheni usalimazi?
Ndiyingozi nakwimeko yam yokuqonda.